दुर्गानाथ शर्मा - | Nagarik News - Nepal Republic Media
दुर्गानाथ शर्माका लेखहरु :
केही दिनअघि बिबिसीले नेता तथा तिनका परिवार कसरी धनी बन्छन् भन्ने विषयमाअंगोलाका राष्ट्रपतिकी छोरी इसाबेलको रोचक कथा प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा एकातिर इसाबेल, आफ्ना पिताको राजनीतिक आडमा कसरी अर्बाैं डलर आर्जन गर्न सफल भइन् भन्ने कथा थियो भने अर्कातिर एंगोलाका गरिब जनताको हविगत देखाइएको थियो ।
दुर्गानाथ शर्मा १९ माघ २०७६ आइतबार ८ मिनेट पाठ
अब नेता, मन्त्री तथा सरकारी अधिकारी, न्यायाधीशहरूलाई पनि घुस खानुभन्दा पहिले सञ्चार माध्यमदेखि डराउनुपर्ने स्थिति आएको छ।
दुर्गानाथ शर्मा ५ माघ २०७६ आइतबार १५ मिनेट पाठ
रेडियो र रक्सी
भोलिपल्ट मेरा साथीले ‘हिजो समाचार पढ्दा आँखा अलि राता थिए नि ! कि पिएर पढिस्’ भने। मैले झल्याँस्स ब्राम्ही दत्त पाण्डे सम्झें। मैले पनि स्याम्पेन पिएर समाचार पढेको एउटा रेकर्ड नै बनाएको छु।
दुर्गानाथ शर्मा २५ पुस २०७६ शुक्रबार ९ मिनेट पाठ
सरकारले आफ्नो बहुमत छ भन्ने सन्देश दिन प्रेसमा अंकुश लगाउने एउटा विवादास्पद कानुन ल्याएको छ। जसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। जुन कानुन नागरिकले सूचना र ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारविरुद्ध छ, त्यसका पक्षमा को लाग्छ र !
दुर्गानाथ शर्मा १८ पुस २०७६ शुक्रबार १२ मिनेट पाठ
भारतको आन्दोलनबाट सिक्ने कि ?
नेपालमा पनि काम गर्न आउने, अपराध गर्न आउने र नेपालमा अपराध गरेर खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारत छिर्ने सिलसिला जारी छ। नेपाल आउने–जाने विदेशीको दर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले भोलि नेपाललाई पनि अहिले भारतलाई जस्तै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता आइनलागोस्।
दुर्गानाथ शर्मा ११ पुस २०७६ शुक्रबार १२ मिनेट पाठ
विकासको पूर्वाधार सडक हो, यो बन्नुपर्छ। तर नेपालमा सडक निर्माण ठेकेदार र राजनीतिक दलका नेतालाई कमाउने भाँडो बनेको छ।
दुर्गानाथ शर्मा ४ पुस २०७६ शुक्रबार ९ मिनेट पाठ
दुर्गानाथ शर्मा २७ मंसिर २०७६ शुक्रबार ११ मिनेट पाठ
दुर्गानाथ शर्माका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्